Home » Blog » Torohevitra momba ny fitafy 10 ho an'ny mpangataka
Torohevitra ara-pahasalamana ho an'ny mpangataka
Mieritreritra ny hanomboka fahazarana andavanandro? Ny fotoana voalohany mandeha any amin'ny gym? Ampiasao ireo toro-làlana 10 ho an'ny mpandray anjara mba hahazoana antoka fa mahatratra ny tanjonao ianao.
1. Mahaiza manao ny asanao
Raha mikasa ny hahazo ny ankamaroan'ny fotoam-pampianarana ianao dia mila mitadidy fa manodidina ny 80% amin'ny vokatra izay azonao avy amin'ny fanatontosanao dia tonga avy amin'ny 20% fotsiny amin'ny fanatontosanao.
Midika izany fa mandritra ny fivoriana iray ora, ny 12 minitra amin'ny fampiofanana ihany no handray anjara amin'ny ankamaroan'ny vokatrao. Ilainao ny manisa ireo minitra ireo. Ampiasao ny fihetseham-po tafahoatra izay miasa mihoatra ny vondrona iray ihany amin'ny fotoana iray mba tena hanararaotra ny fotoanao.
2. Tadidio foana ny mihinana sakafo mahasalama
Ny vatana rehetra izay mamorona tanjona dia tsy azo tratrarina amin'ny fihinanana sakafo mahasalama. Raha mandeha any amin'ny gym ianao mba hahafahanao miditra ao an-trano ary mihinana cheeseburger iray indroa miaraka amin'ny olona 2-olona manompo sira Frantsay, dia tsy hanao ny vatanao velively ianao. Rehefa mandeha any amin'ny mpivarotra entana ianao, mividiana sakafo mahavelona ho solon'ny sakafo tsy an-kanina.
Tokony ho hitanao fa mihinana amin'ny alàlan'ny fanamainana ianao, ary tadidio fa raha mandoro kaloria bebe kokoa ianao dia tsy maintsy mihinana kely fotsiny mba hahazoana antoka fa manana hery ampy ianao mandritra ny andro. Hajao ny sakafo ananananao ary esory ny sakafo matsiro.
3. Hanova ny fahazaran-dratsinao
Tokony hataonao azo antoka fa mihinana tsara ianao ary mihinana sakafo mahasalama. Ny sakafo dia ahitana ny fihinanana amin'ny fotoana mahamety ny andro. Ny tsy fahampian-tsakafo dia tena mahatsiravina ary tsy tokony hihinana amin'ny alina koa ianao. Ny alim-bavaka amin'ny alim-bavaka na amin'ny fotoana mampihetsi-po anao dia mitarika fotsiny amin'ny kalôria tsy ilaina. Miresaha amin'ny mpampiofana manokana momba izay mety hahasoa anao mba hahatratrarana ny tanjonao.
4. Manaova drafitra ny fanatanjahanao
Mba hahazoana antoka fa fantatrao fotsiny hoe rahoviana ianao no hampiofana ary rehefa afaka miandrandra ny fotoana fitrandrahana ianao, dia tena tokony hanomana drafitra ianao. Tadidio fa anisan'izany ny andro fitsaharana ary tokony hahatsapa ny habetsaky ny fotoana anananao.
Tsarovy fa hijanona amin'ny fandaharam-potoanao araka izay tratra ianao mba tsy hiditra amin'ny fahazarana mandingana ny gym. Ny fanaratoana matetika ny fanatanjahan-tena dia fahazaran-dratsy. Tsy ho vitanao ny hanatratra ny tanjonao raha toa ianao ka mahavita ny tsy fananana asa.
5. Manaova Fivoriana ho an'ny 100%
Tsy maintsy tadidinao fa mila fanoloran-tena tanteraka avy amin'ny tenanao ny fanovan'ny vatanao. Tsy afaka misisika andro iray na roa ianao indraindray, satria tsapanao fa mendrika ny andro iray ianao. Mieritrereta raha ho avy ny andro fitsaharanao ary hifikitra amin'izany. Na dia manana drafitra efa nomanina aza ianao, tsidiho ny gym teo an-toerana, ary makà antoka fa haka ora iray isaky ny andro hiasa. Tohizo ihany koa ny sakafo fihinana.
6. Aza avela hanakana anao ny sainao
Raha vehivavy ianao, izay manandrana mandany mavesatra sy mampitombo tarehy kely, dia mora ny mijery vehivavy bodista ary tampoka dia manjavona tampoka.
Ny zava-misy dia ny tsy fahafahan'ny vehivavy ho toy izao; Mitaky drafitra sy ezaka manokana izany. Tsy handeha ianao raha mifikitra amin'ny fandaharan'asa iray nomen'ny mpampiofana anao.
7. Mifanaraka amin'ny zavatra fototra
Tsy maintsy tadidinao fa manomboka amin'ny toetoetra ianao. Mba hisorohana ny fampijaliana sy ny tsy hanohizana ny fampiofanana anao, dia tokony ho azonao antoka fa tianao ny manao fampiharana fototra.
Atombohy amin'ny fotoam-pianarana mafana ary avy eo ampitomboy ny programa fanatontosanao rehefa lasa matoky anao kokoa ianao ary manomboka mitombo ny haavon'ny toetranao.
8. Manomàna ny dingana vaovao
Ataovy azo antoka fa afaka manomana ny fampiofanana ianao ary manana drafitra henjana momba ny fomba tianao handehanana ny asanao. Tsy maintsy manana tanjona azo tratrarina ihany koa ianao, ka raha te hanana abdominals 6 ianao dia tadiavo ny famaritana ny voan'ny muscle ao anatin'ny 6 volana na raha te hamono 20 pounds ianao, ataovy izay hahamety ny fotoana azo atao. Tsy misy mpampiofana manokana afaka hanampy anao raha tsy fantatrao izay tanjonao.
9. Tsarovy ny atao Cardio
Te-hanana abdominals 6 ianao, bizeps, ary tongotra matanjaka? Tsy azonao ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny fampiakarana herin'aratra. Tsy maintsy tadidinao koa fa ny cardio koa. Misy karazana milina azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny klioba ara-pahasalamana. Ny toeram-pivarotan-kanina maro dia manana hazondamosina, ellipticals, bisikileta, ary milina mpamily.
Mila maka antoka ianao fa handoro ny tavanao amin'ny alàlan'ny fanatontosana cardio matetika ary amin'ny farany dia hamoaka ny famaritana ny muscle.
10. Aza atahorana any am-pianarana
Mila mahatsiaro ianao fa ny olona rehetra ao amin'ny gym dia mitovy amin'ny toe-javatra iray ihany, fa tsy ny rehetra dia 20 taona-taona bodista. Ny olona tsirairay dia misy ny tanjona karakaina ary ny tsirairay dia mila manomboka any.
Aza manahy ny hafa mifantoka fotsiny amin'ny tanjonao manokana ary ataovy ny asanao. Raha matahotra ny hanao fanatanjahantena amin'ny tenanao ianao, manao fanatanjahan-tena amin'ny namana iray na manao kilasy fampiasana miaraka amin'ny olon-kafa.
Manana tolo-piasana hafa ve ianao? Comment below
March 10, 2016 FitnessRebates Blog Tsy asian-teny
Day of Saint Patrick's Day Bowflex 2016 Treadclimber Promo